Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta ukuzala kwamakhorali | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kubangela ukubhujiswa kwe- izixhobo zamakhorali. Omunye wemiphumela amakhorali anayo ekuphenduleni ukucindezela okukhiqizwa ukwanda kwezinga lokushisa kolwandle yi-bleaching.
Mhlophe kugcina ngokubulala amakhorali futhi ngaleyo ndlela kubhubhise ukulingana kwemvelo kwemvelo ngoba zonke izinhlobo zezinto ezincike kuma-coral azinandawo. Ukuhlanza kubuye kwatholakala ukuthi kunciphisa ukuzala kwamakhorali. Ku- IGreat Barrier Reef yase-Australia Izindawo ezinkulu zirekhodwe lapho ziye zahlushwa khona ukuphuma kwezimnyama.
Amakhorali anendlela ebaluleke kakhulu yokuzala kabusha. Ibizwa isiphepho esingaphansi kwamanzi. Lokhu kungenxa yokuthi unyaka nonyaka, amakhorali avumelanisa ukuxosha izigidigidi zamaqanda nesidoda. Le nto ibangela ukuthi ama-polyps wamakhorali akhukhuleke ngesikhathi sokuzala futhi lapho ehla angabambelela emfuleni awusize ukhule futhi wakhe kabusha kancane kancane.
Kulo nyaka, le nto eyaziwayo ayenzekanga ngamandla ayo wonke ngenxa yemiphumela ye- ukuguquka kwesimo sezulu Nge-bleaching, okuningi kwezixhobo zamanzi kuthinteka kakhulu futhi abanye abaningi babe nezinkinga zokuzala kulo nyaka. Ukubhoboza ibhali kuthinte ukuzala kwamakhorali asindile. Ngaphandle kwalokhu kunikelwa kwabantu abasha emfuleni, kuya ngokuya kube sengozini futhi kulula ukubhubhisa.
Isithiyo Esikhulu, esine ngamakhilomitha angu-2.300 XNUMX ubude Yisistimu yamakhorali enkulu kunazo zonke emhlabeni kanye ne-UNESCO Heritage Heritage, ibhekene nenkinga enkulu kakhulu ebangelwe ukuphuma kwamakhorali ngenxa yokufudumala kwamanzi esifundeni.
Ukuze kuncishiswe lo mphumela nokucekelwa phansi kwamakhorali, ukukhishwa kwekhabhoni kufanele kuncishiswe. Ngefayela le- Isivumelwano saseParis Kuhloselwe ukunciphisa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa futhi ngethemba lokuthi, ngale ndlela, amakhorali angavalwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta ukuzala kwamakhorali